सडकमै ट्राभल्स एजेन्सीको अवैध काउन्टर ! - Samadhan News
सडकमै ट्राभल्स एजेन्सीको अवैध काउन्टर !
समाधान संवाददाता २०७६ साउन २० गते ११:३०
पोखरा महानगरपालिकाका मेयर मानबहादुर जिसीलाई भेट्न शुक्रबार पोखराकै पर्यटन यातायात व्यवसायीको एक टोली पुग्यो । मेयर समक्ष उक्त टोलीले राष्ट्रबैंकचोकस्थित निर्माणाधीन पर्यटन बसपार्कबारे चासो राखिदिन मात्रै अनुरोध गरेन कि त्यहीँ अगाडि १ ट्राभल एजेन्सीले अवैध रुपमा राखेको काउन्टर हटाइदिन आग्रह गर्‍यो ।
३ महिनायता पर्यटन बसपार्कको काम चलिरहेको छ । बसपार्क यताउता भएका काउन्टर र खाजा घर हटाइएका छन् । तर, त्यहीँ न्यु पानोरमा टुर्स एन्ड ट्राभल्स प्रालिले काउन्टर राखेर धमाधम व्यापार चलाएपछि यातायात व्यवसायीसहित महानगरको समेत टाउको दुखाइ बनेको छ ।
शुक्रबार सूचना पाएका मेयर जिसी तत्कालै बसपार्क निर्माणाधीन क्षेत्रमा पुगे । काउन्टर हटाउन निर्देशन दिए । पर्यटन विभागबाट टेन्डर भई ७ करोड ५० लाख रुपैयाँ लगानीमा आशिष÷सिएम÷मिसन जेभीले बसपार्क निर्माण गरिरहेको छ । तर त्यहाँ बसपार्क कस्तो बन्ने हो त्यसको डिजाइन र विवरण भने टाँस गरेको छैन । आयोजना पक्षलाई विवरण टाँस गर्नसमेत मेयरले निर्देशन दिए । महानगरका तर्फबाट १ इन्जिनियर गुणस्तरीय जाँच र प्रभावकारी कामको अनुगमनका लागि खटाइने मेयरले सुनाए ।
ट्राभल्स एजेन्सी बसपार्क निर्माण क्षेत्रबाट काउन्टर हटाउन राजी भयो । तर, उक्त काउन्टर अहिले राष्ट्रबैंकको क्वार्टरनजिकै भित्तामा टाँसेर सडकबाट व्यवसाय सञ्चालन गरेपछि पुनः व्यवसायीले गुनासो पोखेका छन् ।
‘बसपार्क निर्माण नहुन्जेल सबै ट्राभल्स एजेन्सीले कार्यालयबाट नै सेवा सञ्चालन गरेका छन्,’ मेयरलाई गुनासो पोख्न महानगर पुगेका एक व्यवसायीले भने, ‘कुनै एक कम्पनीले आफूखुसी सडकमा काउन्टर राखेर व्यवसाय गर्नु आपत्तिजनक छ ।’
राष्ट्रबैंकको क्वार्टर पछाडिपट्टि महानगरको जग्गामा ड्यामसाइड युवा क्लबले फुटबल मैदान बनाउने भनिएको क्षेत्रमा अहिले अस्थायी बसपार्क सञ्चालन गरिँदै आएको छ । अस्थायी बसपार्कमा समेत अनुमति बेगर नै क्लबले मासिक १० हजारसम्म लिने गरी खाजा घर र काउन्टर सञ्चालन भएका छन् ।
‘बसपार्क फोहोरग्रस्त छ । जताततै हिलोहिलो । एउटा शौचालयसम्म व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । तर पसल र काउन्टरका लागि भने क्लबबाट अनुमति दिएर सञ्चालन गर्न मिल्छ ?’ अर्को एक व्यवसायीले भने ।
महानगरबाट मेयरसहित गएको टोलीले दिएको निर्देशन पालना नगरेपछि काउन्टर कसरी हटाउनेबारे महानगर आफैं अलमलमा छ । बसपार्कबाट हटाउन निर्देशन दिएको भएपनि फेरि सडकमा लगेर राखेकोबारे आफू जानकार रहेको मेयर जिसीले बताए । उनले भने, ‘एक ठाउँबाट हटाएको हो । फेरि त्यहाँबाट पनि कहाँ राखेको छ भन्ने कुरा आको छ । आज जान भ्याइन । भोलि एकपल्ट हेर्नुपर्ला ।’
नेपाल एसोसियसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट (नाट्टा)पोखराका महासचिव हरिराम अधिकारीले उक्त कम्पनीले काउन्टर राखेकोबारे सम्बन्धित निकायहरुमा जानकारी गराएको बताए । उक्त काउन्टरकै कारण अन्य व्यवसायीले हटाइदिन भन्दै गुनासो गरेको समेत उनले सुनाए । ‘सडकमा डोको बोकेर व्यापार गर्नेलाई महानगरले कारबाही गर्छ । त्यसरी काउन्टर नै राखेकालाई हेर्नुपर्ने हो ।’